Android 5.1.1 dia efa sedraina amin'ny Nexus 5 | Androidsis
Mahaliana fa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay ireo avy ao amin'ny Mountain View dia nanambara ny kinova vaovao an'ny rafi-piasan'izy ireo ho an'ny fitaovana finday, Android 5.1. Ary izao dia hitantsika fa misy kinova Android iray hafa izay andrana amin'ny Nexus 5 samihafa.
Mahaliana ihany koa ny fitsapana voalohany ny fisian'ny Android 5.1.1 ao amin'ny terminal izay efa nanao veloma ny fivarotana Google Play.
Tsy fantatra amin'izao fotoana izao izay fanatsarana ho entin'ity kinova ity, na dia hitanao aza fa ho fanavaozana kely noho ny isa voangona (5.1.1) izany, dia azo inoana fa ity fanavaozana ho avy ity amboary ny bibikely kely an'ny taranaka fahadimy amin'ny tandavan Nexus. Tantara iray izay miverimberina ho an'ny terminal LG, izay nandalo zavatra mitovy tamin'iny fotoana nanambarana ny Android 5.0 Lollipop ary tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia namoaka 5.0.1 ny Google, fanavaozana iray izay nanatsara ny olan'ny bateria, ny fitantanana memoitra RAM na ny fanidiana tsy nampoizina ny fampiharana sasany . Tonga ilay fivoahana noho ny fampiharana Geekbench, fampiharana iray izay mizaha toetra ny fahombiazan'ny fitaovana Android.
Google dia mety nanamboatra ny lesoka mitondra ny lohateny hoe fahatsiarovana mitete, izay maro amin'ireo mpampiasa manana Nexus 5 no nampita tamin'ny tambajotra hatramin'ny fanavaozana ny Android farany. Tonga ny lesoka, araka ny asehon'ny anarany amin'ny teny Anglisy, amin'ny fahatsiarovana RAM an'ilay fitaovana. Hita fa amin'ny fanavaozana ny Android 5.1 dia misoroka ny rafitra ny fitaovana dia manana RAM mihoatra ny 1 GB amin'ireo Gigas 2 ananany. Midika izany fa na dia manomboka aza ny telefaona finday ary maimaimpoana ny fahatsiarovana ny Nexus 5 dia hita fa tsy izany no izy ary efa nipetraka efa ho 1 amin'ny 2 Gigs RAM ny fitaovana nefa tsy nisy fampiharana intsony. nisokatra.
I Google indray te-hanome fahafaham-po ireo mpampiasa manana fitaovana Nexus, satria tsy izany izy irery no eo amin'ny laharany izay havaozina miaraka amin'ny fanavaozana ny rindrambaiko farany. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miandry isika mandra-pahazoantsika vaovao misimisy kokoa hahafantarana izay tena hihatsara ary rahoviana ny daty famoahana ity kinova vaovao ity, nefa tsy isalasalana fa vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa manana an'ity terminal ity eo ampelatanany, mampiseho fa ireo any San Francisco dia manohy manaparitaka ny anao.
Loharano - Geekbench
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Rohy » Android 5.1.1 dia efa sedraina amin'ny Nexus 5 maromaro
Clau terra dia hoy izy:
Izy ireo dia mankaleo amin'ny fanavaozana be loatra ka amin'ny farany dia tsy tonga mihitsy izy ireo
Valiny tamin'i Clau Terra
ary ho an'ny nexus 7 2013 dia tsy fantany hoe rahoviana no hiseho izany?, na 5.1 aza